‘September’: Sehatra Vaovao Hivoahan’ny Hevitra Elatra Havia Ara-Politika Manerana Ny Firaisana Sovietika Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2016 7:58 GMT
Tamin'ny Zoma heriny lasa teo, namoaka ny “September” ny vondrona mpikatroka sy manam-pahaizana avy ao Okraina, Rosia, Belarosia, Kazakhstan, ary Azerbaijan, tranonkala iray izay antenain'izy ireo ho sehatra famoahan-kevitra eo amin'ny samy antoko elatra havia manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha. Mikendry ny hanolotra ny fomba fijery avy amin'ny elatra havia sy avy amin'ny firenena isan-karazany momba ny Firaisana Sovietika teo aloha ny tetikasa, izay nitombo avy amin'ny ” Commons ” ao Okraina, ” Pravsvet ” ao Belarosia, ary ireo fandraisana an-tanana avy amin'ny antoko ankavia hafa ao amin'ny faritra hanasongadinana ireo fanadihadiana avy amin'ny mpanoratra manerana ny faritra.
Mivaky toy izao ny pejy About Us (Momba Anay) ao amin'ny September:
Amin'izao fotoana izao aloha, mbola ao Rosia ihany no namoahana ny September, na dia mikasa ny handika ny andinin-teny avy amin'ny famoahana lahatsoratra miandany amin'ny elatra havia aza ny toniandahatsoratra toy ny Jacobin sy ny Open Democracy. Ahitana ny “Neoliberalisma miaraka amin'ny toera mampiavaka ny Rosiana,” nosoratan'i Ilya Matveev sy ny “Ny Zavon'ny ‘Ady Hybrida': Nahoana no mampidi-doza ny mieritreritra Hybrida,” nosoratan'i Vladimir Artyukh ny lahatsoratra hita ao amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao .
04 Oktobra 2020Azia Afovoany sy Kaokazy
30 Septambra 2020Azia Afovoany sy Kaokazy